The Dark Mod, lalao mpangalatra miendrika mpangalatra ho an'i Ubuntu | Ubunlog
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny The Dark Mod (TDM) isika. Amin'ireo tranga izay hiresahantsika Lalao Open Source, Matetika dia matetika no mahita lalao izay misy tontolo manodidina sy sary tsy dia ampy loatra amin'ny vanim-potoana ankehitriny, na dia mety hahafinaritra toy ny lalao ankehitriny ihany aza.
Sendra nahita an'ity lalao Open Source ity aho, na dia efa taona vitsivitsy aza izy io, izay tsy mila fialonana amin'ny lalao ara-barotra, momba ny filalaovana, ny toerana ary ny kalitao. Ny Dark Mod dia lalao iray nentanim-panahy avy amin'ny andian-jiolahim-boto izay navoaka voalohany ho Mod for Doom 3 tamin'ny 2009. Miaraka amin'ny kinova 2.0 izay nivoaka tamin'ny Oktobra 2013, Dark Mod dia nahavita lasa lalao video irery avy amin'ny Doom 3.
Izay ho hitantsika dia kilalao olona voalohany, zavatra efa zatra hitantsika amin'ny FPS na lalao mpitifitra olona voalohany. Ny lalao dia manome ny mpampiasa fotodrafitrasa sy fitaovana fototra toy ny motera, firafitra, maodely ary tonian-dahatsoratra. Ny iraka sy ny fampielezan-kevitra dia notontosain'ny Fiaraha-monina mpampiasa. Notarihin'ny mpilatsaka an-tsitrapo avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ny tetikasa ary azo idirana malalaka.
Ny tontolon'ny Dark Mod dia maizina, misy singa antonony toy izany koa ireo singa tamin'ny vanim-potoana Victoria. Na dia i Dark Mod aza dia nahazo aingam-panahy tamin'ny andiany mpangalatra avy amin'ny Look Glass Studios, tsy misy fitaovana na anarany intsony noho ny Copyright.
Rehefa manomboka ny lalao, ny mpampiasa dia ho lasa mpangalatra izay tsy maintsy mandeha misintona tontolo feno fankahalana sy feno ota. Izany no antony tsy maintsy handroahany olona na hianika ny tranon'ny mpanankarena amin'ny alina. Safidy handroso ihany koa ny blackmail sy ny vono olona.
Tsy fahaizana miady dia tsy maintsy misoroka ny fahavalony ny mpilalao, miafina ao anaty aloka ary misoroka ny tabataba. Mba hahatratrarana ny tanjony, ny mpilalao dia afaka mampiasa fitaovana manokana toy ny hidin-trano, karazana zana-tsipìka, potion-baomba ary zavatra hafa izay tsy maintsy ho hita mandritra ny lalao. Mandritra ny lalao dia tsy maintsy ataontsika manatanteraka iraka sasany, ankoatry ny fikirakira voajanahary ny zavatra rehetra izay tsy visy na mamirapiratra, ary miharihary fa tsy hita.
Fa hafa noho io, tsy vitan'ny halatra madio fotsiny, ahitana singa marobe avy amin'ny karazana lalao rehetra, FPS, ROL, Paikady, Puzzle, Mistery ka hatramin'ny Horror Survival madio indrindra. Tokony holazaina fa ny misiona sasany dia mety ho sarotra be ary mila antsika ora maro hamita azy ireo. Misy horonantsary YouTube amin'izy ireo, ho an'ireo izay tafahitsoka ao amin'izy ireo.
1 Sintomy ary milalao The Dark Mod maimaim-poana
1.1 Mihazakazaha TDM
Sintomy ary milalao The Dark Mod maimaim-poana
Ilay lalao Ny maizina mod mety ho misintona maimaim-poana tanteraka amin'ny pejiny ofisialy (Windows, Mac ary Gnu / Linux) Milanja manodidina ny 2 Gb rehefa misintona azy isika.
Raha vao misintona ny lalao isika dia hahita izany tamin'ny voalohany dia tonga miaraka amin'ny iraka 2, iray amin'izany ny fampiofanana. Ireo iraka hafa, efa ho 100 izao, dia azo sintonina sy ampiana avy amin'ny menio lalao iray ihany. Maimaimpoana maimaimpoana tanteraka ny lalao The Dark Mod.
Mba hahazoana ity lalao ity amin'ny rafitry ny Ubuntu dia mila manaraka ireto dingana manaraka fotsiny izahay:
Hanombohana dia hanao mamorona lahatahiry antsoina hoe TDM ao amin'ny lahatahiry an-trano hampidina ny lalao ao.
Manohy izahay misintona ny kinova 32-bit ho an'ny Linux ary hongotantsika ao anaty folder TDM izay vao noforoninay. Is koa Misy dikanteny 64-bit ho an'ny Linux.
Raha vantany vao alaina ny rakitra izay mifanaraka amin'ny maritrano ny rafitray miasa dia tsy maintsy hataontsika amin'ny alàlan'ny fanoratana ity baiko manaraka ity ao amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T):
Ny dingana manaraka dia ny fampidinana ny lalao amin'ny alàlan'ny fisie izay vao nosintominay. Raha hanao izany dia tsy maintsy mandalo ny safidy –Nosavava ny tenany rehefa manatanteraka ilay rakitra mifanaraka aminy izahay amin'ny maritrano ny ekipanay. Toy izao no hataontsika:
Ilay baiko etsy ambony dia mety maharitra fotoana fohy, arakaraka ny hafainganan'ny Internet anao nanomboka teo hifandray amin'ny mpizara ary alaina ireo fonosana ilaina hihazakazaka ny lalao.
Aorian'ny fisintomana ny lalao dia afaka manomboka ny Dark Mod amin'ny fampiasana ny binary thedarkmod.x86 na thedarkmod.x64 ho hitantsika ao anatin'ny fampirimana TDM izay noforoninay taloha.
Afaka manao mahazo fampahalalana bebe kokoa momba ity lalao ity ao amin'ny Wiki noforonina ho an'ny tetikasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » The Dark Mod, lalao mpangalatra miendrika mpangalatra ho an'i Ubuntu
Fikarohana dia hoy izy:
Mahaliana, fa ny tena zava-dehibe ary tsy manome hevitra anao velively, amin'ny Espaniola ve izany? Misaotra Miarahaba.
Valiny amin'ny Espaniôla
Damien Amoedo dia hoy izy:
Notsapaiko tamin'ny teny anglisy. Ny marina dia tsy nanamarina aho raha azo ampiasaina amin'ny teny espaniola.
Tonga ny kinova vaovao an'ny Zorin OS 15 ary ireto ny vaovaony
Boden: rafitry ny hazo fijaliana amin'ny fampandrosoana ny finday